तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशीलालाई मुद्दा जिताउन लोकमानको १० करोड अफर - Bagaicha.com
तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशीलालाई मुद्दा जिताउन लोकमानको १० करोड अफर
बगैचा सम्वाददाता २६ श्रावण २०७५, शनिबार ०८:४८
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा आफूविरुद्धको मुद्दा जिताइदिन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई १० करोड रुपैयाँ ‘गोडधुवा’ दिन खोजेको खुलासा भएको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीलाका पति दुर्गा सुवेदीको शुक्रबार प्रकाशित पुस्तक ‘विमान विद्रोह’ मार्फत लोकमानले घुसको प्रलोभन दिएको खुलेको हो। याे समाचार नागरिक दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
पुस्तकको यो प्रसंगले ठूला मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई प्रभावमा पार्न दिइने प्रलोभन र दबाब उजागर गरेको छ। पुस्तकमा लेखिएको छ, ‘टोलीमा आएको एकजनाले मलाई सुनायो– चाँदीको खड्कुलोमा राखेर गोडा धुने रे ! अर्कोले मलाई छेउमै बोलाएर भन्यो– बाहिर गेटमा रोकिएको गाडीमा १० करोड गोडधुवा छ।’ प्रधानन्यायाधीश निवासमा बस्दा सबभन्दा ठूलो सकसचाहिँ लोकमानको मुद्दा आएपछि भएको सुवेदीले लेखेका छन्। अख्तियार प्रमुख आयुक्त हुन ‘लोकमानसिंह कार्कीको योग्यता पुग्दैन, उनी अयोग्य हुन्’ भनेर मुद्दा परेको थियो । जनआन्दोलन दबाउने काममा पनि सक्रिय भएकाले उनलाई अयोग्य भनिएको थियो। तर, न्यायाधीश गोपाल पराजुलीलगायतको इजलासले उनलाई चोख्याइदिएपछि यसमा पुनरावेदन परेको थियो।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीलाले यो मुद्दालाई निस्सा दिएर पुनरावलोकनमा पठाएकी थिइन्। लोकमानको अयोग्यतामाथि फेरि बहस हुन लागेको र उनलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने भन्दै त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जका डा. गोविन्द केसीको नेतृत्वमा आन्दोलन सुरु भइसकेको थियो। सुशीलाको ठाडो स्वभावका कारण लोकमानलाई धेरै डर रहेकाले उनले दिदीको नाता लगाउन प्रयास गरेको घटनाक्रमलाई समेत सुवेदीले पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन्। लोकमान र सुशीला दुवै विराटनगरका कार्की। लोकमानले यही फेरो समाएर सुशीलालाई ‘दिदी’ नाता लगाउन खोजे।’ भनिएको छ ।
पछि एउटा भेटमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री (हाल नेकपा अध्यक्ष) पुष्पकमल दाहालले सुशीलालाई ‘त्यत्रो १० करोड पठाउँदा किन नलिएको?’ भनेर सोधेको प्रसंग पुस्तकमा उल्लेख छ । ‘त्यहाँ झन्डै झगडा प¥यो,’ सुवेदीले लेखेका छन्, ‘एक कार्यक्रममा बोल्दा सुशीलाले प्रचण्ड (दाहाल) ले यसरी १० करोड रुपैयाँ पठाए र किन नलिएको भनेर मलाई सोधे भनेर भनिदिइन्। त्यसपछि चाहिँ प्रचण्डले हैट! यिनले त बाहिर बोलिदिने रहेछिन् भनेर उहाँलाई भेट्न र केही भन्नै छोडे।’ अदालतमा मुद्दा चलिरहेकै बेला एमाले र माओवादीका केही सांसदले लोकमानविरुद्ध ३ कात्तिक २०७३ मा संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। त्यसपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परे। त्यसमा छलफल चलिरहेकै बेला २४ पुस २०७३ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले लोकमानलाई अयोग्य ठहर गरेको थियो।